Umfundi ovelele - ITS Tech School
I-ITIL iLawula kwi-Lifecycle
Abaxhasayo abasebenzi be-Gr8. Umqeqeshi une-exprinace enhle kwi-ITEM. Umgangatho wokutya ogqwesileyo. jikelele ngokugqithiseleyo i-exprinace ngexesha loqeqesho
Usebenziso lweeNkonzo eziphakathi kwe-ITIL
Kwakungqeqesho oluhle kunye nomqeqeshi omhle kunye nokufunda. Kwakunzima ukwazi ukuba imibutho yomsebenzi ngaphakathi kunye neenkqubo ezidibeneyo. Ngaphezu koko uMqeqeshi wayenolwazi kangangokuthi wachaza yonke into ngokunyamezela nangemizekelo eyenzayo eyenza ndiqonde nganye kunye nayo yonke into ngokulula. Andizange ndikulindele ukuba kube ngamava amnandi kangaka kodwa ndiceba ukwenza zonke izatifikethi zam ezivela apha kuphela. I-Cheers kunye neyona nto ibhetele kumntu wonke.
Yayiseshoni yokufunda enkulu. Ndiyathemba ukuba sineseshoni ezininzi ezifana nale nto kwezinye iimjikelezo zobomi, ndingathanda ukuya khona nokufunda.
Iziko layo elikhulu kunye nabasebenzi bekhontrakthi kunye ne-Infra efunekayo. Kucocwe i-ITIL isiseko kwinzame yokuqala kunye namanqaku amahle.
Ncoma konke ukuba ujoyine oku kuqinisekiso lwabo.
I-ITIL- I-Intermediate Service Design
Ndiyenzile isiseko sam kunye ne-ITIL kwiSikolo seSikolo se-tech ngenyanga eyedlule ngokwayo. Ndifumene uMphathi weZentengiso uMnu Sandeep kunye nomqeqeshi kakhulu kunceda ukuqonda inkqubo epheleleyo kunye nokuba banceda ukuzisa amathuba okuza kubaviwa. Ndiyabulela kubo bobabini kwaye ndifuna ukusebenzisana okufanayo kwiikhosi zam ezilandelayo kunye ne-ITSTECHSCHOOL
Ubungcali obuhle buboniswe ngumbutho wakho kunye nazo zonke izithembiso ezithembisiweyo ziya kuthathwa ngokunyamekela.
Ndiya kubongoza bonke ababuza malunga neziko lakho ukuba bathathe ikhosi ye-ITIL yesiseko kwiziko lakho.Umqeqeshi wayemhle kakhulu.
Uqeqesho lwaluhle kakhulu. Indlela yokudibanisa yayimangalisa. Umqeqeshi wayechazwe kakuhle kwaye wayichukumiseka ngendlela efanelekileyo. ngokubanzi kwakuyinto enkulu yokufunda kunye neYTS.
Kuyinto yolonwabo ngokwenene ukuba iChikanna ibe ngumfundisi wethu weSelenium. Ukubambisana ngokubanzi kwimixholo yekhosi kunye nabaqeqeshi bezobugcisa kwisifundo okwenziwe umdla kwaye kunomdla.
Kuzo zonke iingcali ezifuna ukufunda i-selenium kwaye zifezekise i-CICD yokuvavanya ngokuzenzekelayo oku kufuneka ukuba yenze inkambo ngokukodwa kwiingcali ezifana noMnu Chikkanna.
Uqeqesho oluhle kakhulu endikulo. Umqeqeshi unezakhono ezigqithiseleyo zeJava kunye nePython. Wachaza yonke into ngokuzigcina ezicathulweni zethu kwaye sakwazi ukufumana i-90% kwiilati zezinto ezifundise kwiintsuku zokugqibela ze-4. Ndiyabulela kuwe ngokuthumela umqeqeshi oqeqeshileyo.
UQeqesho oluQe Zombini i-PPT kunye nezandla kwividiyo ziyamangalisa ngokubhekiselele kwiimodyuli.
Umqeqeshi wayenobuchule obunolwazi oluninzi, wachaza izihloko ngokubanzi kwaye wacacisa ezininzi iimbuzo zethu
jikelele kwakuqeqesho olufanelekileyo